देउवासामु यक्ष प्रश्नः सत्ता रोज्ने कि पार्टीको भविष्य हेर्ने ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
देउवासामु यक्ष प्रश्नः सत्ता रोज्ने कि पार्टीको भविष्य हेर्ने ?
प्रचण्ड र माधवको उक्साहटमा लाग्नुअघि देउवाले बुझ्नुपर्ने कुरा
२०७८ बैशाख २३, बिहीबार ०५:२०:००
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपालसँगै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सर्न दबाब दिइरहेका छन् । देउवा पनि पछिल्ला दिनमा केही हौसिएको देखिन्छ । दैनिक पार्टी नेताहरुको बैठक बोलाउनेदेखि विपक्षी नेताहरुसँग उठबसमा सक्रियता देखाएका छन् ।
तर, प्रचण्ड र माधवको उक्साहटमा लाग्नुअघि बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि ती दुवै नेताले चाहेर पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने छैनन् । प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डसँग जम्मा ४९ सिट छन् । माधव नेपालको आफ्नै सांसद पद धरापमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै न कुनै रुपमा सम्झौता गरेपछि मात्र नेपाल र उनीपक्षधर अरु नेताको पद जोगिनेवाला छ । जसले आफ्नै पद जोगाउन सक्दैन, उसले अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न उक्साउनु भनेको आफूजस्तै जोगी बन्ने बाटोमा अग्रसर गराउनु हो ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीलाई जसरी पनि उखेल्नुपर्ने भनेर लागेका हुन् । तीमध्ये भट्टराई अहिले गम्भीर र जटिल प्रकृतिको शल्यक्रिया गराएर अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् । उनले चाहेर पनि देउवाका पक्षमा माहोल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै नेपालकै खेमामा उभिएर ओलीविरोध अभियानमा जुटेका नेता झलनाथ खनाल समेत कोभिड संक्रमणका कारण सिकिस्त अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन् ।
त्यसो त सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ र यसले पनि ठूलै संख्यामा संक्रमण देखाउने सम्भावना छ । त्यसले संसद बैठक नै प्रभावित पार्ने जोखिम समेत उत्तिकै छ । तैपनि, देउवालाई जुन शक्ति र समूह प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै अघि सारिरहेका छन्, ती सबै कमजोर धरातलमा छन् र राजनीतिक रुपमा निकै अविश्वसनीय पनि । त्यसकारण देउवा हौसिने होइन कि बडो सतर्कतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कमजोर र अपरिपक्व तवरले अघि बढ्दा झन् रुखको टिप्दा पोल्टाको पनि पोखिने जोखिम छ ।
देउवा अहिले सत्तामा केन्द्रित हुन खोजेमा पार्टीमा उनको पकड गुम्न सक्नेछ । एक त प्रचण्डले बाँकी दुई वर्षलाई आधा–आधा प्रधानमन्त्री चलाऔँ भनेर अहिले नै सर्तनामा गराउन खोजेका छन् । प्रचण्डसँगको साझेदारीले पहिलो चुनावमा एमाले राप्रपाको हैसियतमा पुग्यो । दोस्रो साझेदारीले प्रजा परिषद बनाइदिने जोखिम हुन सक्छ ।
ओलीलाई ढाल्न एकमत भएका सबै शक्तिले देउवालाई सत्तामा पुर्याउन काँध थाप्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन । जति शक्तिले उनलाई साथ दिन्छु भनेका छन्, एक त तिनीहरु स्वयंको ठेगान छैन । तिनीहरु आफैमा समस्याग्रस्त छन् । अर्को, तिनीहरु निकै कमजोर र जीर्ण अवस्थामा छन् । सानो कडी मात्र फुस्किनेबित्तिकै देउवाको सत्ता–सिंहासन गल्र्यामगुर्लुम ढल्नेछ । अझ केपी ओलीजस्ता जब्बर राजनीतिक खेलाडीका सामु जोरजाम गरेर बनाइएको गठबन्धनका किलाकाँटा फुस्काउन कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन ।
तसर्थ, देउवाका निम्ति निकै सुगम र सुरक्षित बाटो भनेको पार्टीमा संक्षिप्त महाधिवेशन गरी अहिलेकै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिएर वैधानिकताको संकट टार्ने, अनि वैशाख २७ पछि कुनै पनि पक्ष–विपक्षमा नलागी स्वतःस्फूर्त रुपमा राजनीतिलाई निर्वाचनको बाटोमा अग्रसर गराउने । यो नै उनका लागि साँप पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँच्चिने जुक्ति देखिन्छ ।
ओली सरकारका दिनगन्ती सुरु भइसकेका छन् । अर्को सरकार आउने ठेगान छैन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो चुनावको पक्षमा माहोल बनाउन सके मात्र कांग्रेसको पुनःजीवन, देउवाको शक्तिशाली पुनरागमन र सभ्य एवं श्लील लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट ओलीको बहिर्गमन सम्भव हुनेछ । लागेर, ससाना समूहलाई पुल्पुल्याउँदै तिनका स्वार्थको मलजल गरेर कांग्रेसको साख रहने छैन । फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुँदैमा पार्टीलाई जिताउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि २०७४ को आमनिर्वाचन सिद्ध गरिसकेको छ ।